mairie-antananarivo – Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo
auteur 25 janoary 2017 Commentaires fermés
Nandritra ny Fivoriana tsy aram-potoana notontosain’ny Mpanolontsainan’ny Tananan’Antananarivo ny Alarobia 25 Janoary 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely no nanapahan’izy ireo fa tsy azon’ny olontsotra na iza na iza ampiasaina ny toerana etsy Antanimbarinandriana fa mijanona ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Toerana manatantara izany toerana izany ary efa voasokajy ho Vakoka. Teo no nanaovan’ny Mpanjaka vavy tamin’ny Faha Mpanjaka fambolem-bary ka izay no nahatonga ny anarana hoe Antanimbarinandriana.
Ity fanampahankevitra noraisin’ny Mpanolontsainan’ny Tanàna ,androany ity dia manafoana avy hatrany ny fanampahankevitra nitondra ny laharana 9 Bis izay fahefana nomen’ny Mpanolontsainan’ny Tanàna tamin’ny taona 2012 nandritra ny Tetezamita ny PDS tamin’izany fotoana izany Edgard Razafindravaha ka nahafahan’ny Jovenna hampiasa ny tany etsy Antanimbarinandriana amin’ny alalan’ny ‘’ Bail ‘’ mitondra ny datin’ny 12 Jona 2012. Marihana fa ireo Mpanolontsaina nanapankevitra androany niisa 37 dia niray feo tamin’ity fanapahankevitra tsy ahafahan’ny olontsotra hampiasa ity tany etsy Antanimbarinandriana ity.
Nanome fahefana ny Mpanatanteraka ato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Mpanolontsainan’ny Tanàna hitondra ity raharaha ity eo amin’ny Fitsarana mahefa. Nofohanan’ny Mpanolontsaina nivory androany koa ny fanapahankevitry ny Mpanolontsainan’ny Tanàna tamin’ny 1999 nivarotra ny ampahantany etsy Antaninarenina mirefy 2500 metatra toradroa tamin’ny olontsotra. Nomena baiko koa ny Mpanatanteraka eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra hitondra ny raharaha eo anivon’ny Fitsarana mahefa.